माडीका मेयर भन्छन्, ‘चेपाङका घर पछि बनाएर पहिले राम मन्दिर बनाउने कुरा गलत हुन्छ’ - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः भानुजयन्तीको दिन बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रामको वास्तविक जन्मभूमि चितवनको अयोध्यापुरी भएको दाबी गरेको विषयको चर्चा अझैं सेलाएको छैन ।
उक्त चर्चा सेलाउन नपाउँदै माडी नगरपालिकाको टोलीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार फोन गर्दै शनिबार बालुवाटारको आउन निम्तो दिए ।
आमन्त्रणपछि माडी नगरपालिकाका मेयर ठाकुरप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा शनिबार बालुवाटार पुगेको टोलीलाई ओलीले आउँदो रामनवमीमा नै उद्घाटन गर्न मिल्ने गरि अयोध्यापुरीमा कुनै मन्दिर वा मूर्ति, राम, सीता, लक्ष्मणको प्रतिमा बनाउने, कुनै मेला, महोत्सव वा जात्रा आयोजना गर्ने गरी काम थाल्न निर्देशन दिए । उक्त निर्देशनले सामाजिक सञ्जालमा फेरि अर्को बहस सिर्जना गरिदिएको छ ।
माडी नगरपालिकाका प्रतिनिधिमण्डलकाे प्रधानमन्त्रीसँग भेट ।
तर, जहाँ राम मन्दिर निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीले काम थाल्न निर्देशन दिएका छन्, त्यहाँ राज्यले नै चेपाङका घरमा हात्ती लगाएर भत्काएको छ । ३ साउनमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र सेनाको टोलीले माडी–९ कुसुमखोलामा रहेका दुई चेपाङका घरमा आगो लगाउनुका साथै आठ घर भत्काइदिएको थियो ।
जसका कारण वर्षामा चेपाङहरू बिचल्लीमा परेका छन् । उक्त विषयमा सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । अहिले चेपाङका घर बनाउने मुख्य कुरा कि अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर ? यसैविषयमा हामीले माडी नगरपालिकाका मेयर ठाकुरप्रसाद ढकालसँग कुराकानी गरेका छौं ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले माडीको अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर बनाउन निर्देशन दिनुभएछ । कहिलेदेखि थाल्नुहुन्छ काम ?
– हामीले अयोध्या खोज अनुसन्धान तथा व्यवस्थापन समिति बनाएका छौं । शुरूमा त्यसको बैठक तत्कालै बसाल्छौं । मदिर कहाँ बनाउने, कति जग्गा चाहिन्छ भनेर निक्र्यौल गछौं । अनि डीपीआरको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं । सकेसम्म यो दसैंको रामनवमीमा कुनै मन्दिर वा मूर्ति, राम, सीता, लक्ष्मणको प्रतिको उद्घाटन गर्ने, कुनै मेला, महोत्सव वा जात्रा आयोजना गर्ने तयारी गरेका छौं । अर्को दसैंसम्म त्यो काम पुरा गर्ने तयारीअनुसार अगाडि बढ्छौं ।
तपाईं त्यहाँकै स्थानीय पनि हो । त्यसैले त्यहाँ नै रामको जन्म भएको हो भन्ने केही आधार दुख्नुहुन्छ ?
– धर्मशास्त्रकै कुरा गर्नुहुन्छ भने भौतिकवादी हुँ । आध्यात्मवादी हैन । तर आध्यात्मवादीको कुरा हेर्दा सुन्दा यहाँ बाल्मिकी आश्रम, रामचन्द्रले नुहाउने भनिएको परशुराम कुण्ड, रामसीता गुफा छ । अझैं कतै केही छ भनेर खोजिरहेका थियौं । विभिन्न लेखदेखि रामको जन्म भएको भन्ने केही भग्नावेशष भेटाएका छौं । प्रधानमन्त्रीले नै यस विषयमा बोल्दा सहजता भएको छ । भग्नावेशषबारे पुरातत्व विभागले प्रमाणित गरेपछि टुंगो लाग्ला ।
त्यहाँ रामको मन्दिर बन्दा के फाइदा पुग्छ माडीको विकासका लागि ?
– विकासमा फाइदा पुग्छ । धार्मिक पर्यटन फस्टाउँछ । हिजोको छलफलपछि उत्साहित छौं । यो माडीका लागि ठूलो उपलब्धि हो ।
माडी नगरपालिकाको नाम फेरेर अयोध्यापुरी राख्ने तयारी गर्न पनि सुझाब दिनुभएछ प्रधानमन्त्रीले । फेर्नुहुन्छ ?
– रामको जन्म नै यहाँ भएको भन्ने प्रमाणित भइसकेपछि नाम फेर्दा राम्रो हुन्छ । त्यस विषयमा छलफल चलाउँछौं ।
याे पनि पढ्नुस जब ओलीले युवतीलाई झुटो ठेगाना बताए...
सरकारले नै चेपाङका घरमा हात्ती लगाएर भत्काएको विषयमा सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । चेपाङहरू बिचल्लीमा परेका छन् । घरवारविहीन चेपाङको वास के गर्ने टुंगो छैन । अहिले चेपाङका घर बनाउने मुख्य कुरा कि अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर ?
– चेपाङका घर पछि बनाएर पहिले राम मन्दिर बनाउने कुरा गलत हुन्छ । पहिलो चेपाङका घर बनाउने कुरा नगरपालिकोको प्राथमिकतामा छ । घर कहाँ बनाउने भनेर ठाउँ हेर्न मंगलबार शहरी विकाश मन्त्रालयको टोली आउँदैछ । प्रधानमन्त्री ज्यूले पनि सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ । सरकारले नै हात्ती लगाएर भत्काएका चेपाङका घर पहिले बन्छन् । राम मन्दिर बनाउँदै गर्दा चेपाङका झुप्रा पनि उठ्नुपर्छ, जनताको भलो गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएका वेला गरिबका घर भत्काउने र मन्दिर मात्र बनाउने हो भने अत्याचार हुन्छ ।
ट्याग्स: अयोध्यापुरी, केपी ओली, चेपाङ, ठाकुरप्रसाद ढकाल, माडी नगरपालिका, राम